Fifidianana Any Iràka : Ny Sasany Manao Ankivy Ny Fifidianana ‘Tsy Misy Dikany’, Ny Hafa Mifidy Hanozongozonana Ny Parlemanta · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Mey 2018 10:46 GMT
Vakio amin'ny teny Français, ਪੰਜਾਬੀ, Español, русский, Ελληνικά, English
Dikasarin'ny fankalazan'ny mpanohana an'i Muqtada al-Sadr ny fandreseny tamin'ny fifidianana. Loharano avy amin'ny lahatsarin'ny YouTube ‘Ahoana no fomba nanararaotan'i Muqtada al-Sadr, mpitarika ny fifidianana ny hadisoam-panantenana faobe’ nampiakarin'ny fantsona PBS NewsHour tamin'ny 14 May 2018.
Firaisan'ny vondron'antoko tsy mankaiza loatra no nandresy tamin'ny fifidianana parlemantera irakiana voalohany hatramin'ny nandresen'ny firenena ny ISIS (fanjakàna Islamika) tamin'ny herintaona.
Nisafidy ny hanozongozona ny zavamisy ara-politika amin'izao fotoana izao ny mpifidy tamin'ny fanohanana ny Sairoun (Firosoana mankany amin'ny Fiovàna), fikambanana tarihin'ilay mpitondra fivavahana Shia eken'ny olona, Muqtada al-Sadr. Isam-bato 1,3 tapitrisa no voaangon'ny vondrom-pikambanan'ny antokon'ny Istaqma ( Fahamarinana) -n'i Sadr sy ireo vondrona laika enina hafa, isan'izany ny Antoko Kaominista irakiana, izany hoe ny seza 54 amin'ireo seza 329 ao amin'ny parlemanta, betsaka noho ny an'ireo vondron'antoko hafa.
Nanomboka hatramin'ny fifidianana demokratika voalohany tany Iraka tamin'ny 2005 ireo mpanao politika no efa nitady vato hatrany tamin'ny filazana ny maha-irakiàna iombonana . Noho izany, fotoana tsy manam-paharoa eo amin'ny tantaran'ny politika irakiana ny fandresen'i Sairoun, manaporofo izany fa tsy voatery hifidy ny laharan'ny vondrom-poko ara-pivavahana ny irakiana ary tsy maintsy mila ezaka bebe kokoa ireo mpanao politikan'ny ampitso raha te-handresy lahatra ny olona.
Mampiseho ihany koa ny mety ho fihatahana amin'ny politika manasohaso fotokevitr'olon-tokana mba hampiroboroboana ny fanentanana momba ny olana mianjady amin'ny firenena izany.
Niavaka tamin'ireo mpanao politika irakiana, taloha sy ankehitriny, i Sadr tamin'ny fampahafantarany ny tenany ho nasionalista sy mpandala ny vahoaka, ankoatry ny fampifantohana ny fampielezankeviny tamin'ny fanavaozana ny fitantanana, fanafoanana ny kolikoly ary ny fanatsaràna ireo tolotra ho an'ny vahoaka.
Tohanany ihany koa ny famolavolàna governemanta manampahaizana, miala amin'ny rafitra hoe misy fetranà isan'olona isaky ny vondrom-poko ara-pivavahana izay nametraka mpanao politika manokana sangany nefa tsy mahefa sady mpanao kolikoly.
‘Tsy nahita safidy hafa hanehoako ny fandavako aho afa-tsy ny fanaovana ankivy’
Saingy raha mety mihatsara ny tontolo politikan'i Iràka, ny fihenan'ny taham-pahavitrihana tamin'ity taona ity dia manome hevitra fa kely finoana ny irakiàna ny amin'ny hitondran'ilay fifidianana fiovàna ho amin'ny tsara.
Araka ny tatitry ny vaomieram-pifidianana any Iràka, dia 44,5 isan-jaton'ny amin'ireo 22 tapitrisa mpifidy voasoratra anarana no nandatsa-bato tamin'ny fifidianana tamin'ity taona ity, manasongadina ny fihenàna 62 isan-jato mitaha amin'ny fifidianana tamin'ny 2010 sy 2014 ary ny fara-tampony 70 isan-jato tamin'ny 2005.
Mampiseho ny hadisoam-panantenan'ireo mpifidy eo amin'ny sehatra politika ity fihenan'ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy ity. Tsy nahita na dia ezaka kely akory mba nataon'ny governemanta hiadiana amin'ny fihanaky ny kolikoly. ny tsy fahamarinan-toerana ara-toekarena ary ny fahapotehan'ireo tolotra ho an'ny vahoaka ny irakiàna.
Tonga hatramin'ny fanombohana ny fanentanana amin'ny haino aman-jery sosialy mba hampirisihana ireo mpifidy hanao ankivy ny fifidianana ireo mpikatroka mafana fo irakiàna tamin'ny fitanisàna ny tsy fahampian'ny fanavaozana sy ny lalàna izay manilika tsy ara-drariny ireo antoko madinika mba hitazonana ny endrika politika misy ankehitriny.
Nohazavain'ilay mpanoratra any Baghdad, Mustafa Sadoon, tao amin'ny tafatafa tamin'ny Washington Post ny antony nahatonga azy hanapa-kevitra tsy hifidy :
Nandray anjara tamin'ireo fifidianana rehetra teo aloha aho, mbola tsy misy fiovàna hatramin'izao. Efa nanohitra ny rafi-pifidianana izahay, fa tsy nisy niheno. Tsy nanan-tsafidy hafa hanehoako ny fandavako ankoatry ny fanaovana ankivy aho.
Fahatsapàna mitovy amin'izany no nozarain'ilay irakiàna mpitoraka bilaogy, Sabaa Subih, tao amin'ny Niqash, tranonkalam-baovao misy tenim-pirenena maro :
Nanapa-kevitra ny hanao ankivy ilay fifidianana izahay satria heverinay fa zava-poana izany. Tsy misy akory ny tena fiovàna marina ary dia voafandrika ao anaty lavaka mangitsokitsoka izay nohadian'ny mpanao politika sangany izahay ; nampiasainy ny fahefany mba handaniana ny lalàna hiantohana ny fijanonan'ny antoko lehibe ao amin'ny governemanta ary hahafahany hanohy hatrany ny fomba ratsiny : ny kolikoly. Tsy omeny , na dia vintana kely fotsiny aza, ny mpifidy mba hanala aminy ny fahefàny.
Nambaran'ilay irakiàna, Hassan Shian, tao amin'ny Al-Rafidain, fantsom-baovao irakiàna amin'ny teny arabo ihany koa ny hadisoam-panantenany :
Ireo mpanao politika mpanao kolikoly ireo foana no afaka miverina eo amin'ny fitondrana. Tsy misy ny mangarahara aty Iràka, hosoka daholo ny zava-drehetra.
Ny fanomezana seza ataon'ny Webster/Sainte-Laguë no fototr'ity tsy fahafaham-po amin'ny fizotry ny fifidianana ity. Ho fanampiana ireo antoko madinika amin'ny fanomezana azy ireo toerana tsaratsara kokoa ao amin'ny governemanta no tanjon'ity paika ity ; saingy novàn'ireo mpanao lalàna ho fanomezana tombony ireo antoko lehibe, izay heverin'ny irakiàna fa hitazonana ireo hery mpanao kolikoly eo amin'ny fitondràna.
Raha betsaka ireo irakiàna tsy matoky loatra ny governemanta vaovao, dia voalaza fa toa miezaka hanome toky ny vahoaka i Sadr fa ho avy ny fiovàna. Hoy izy tao amin'ny lahateny iray:
Hahavatra sy tsy hanavaka ny governemantanay, tsy hanilika olona izahay. Hiasa ho an'ny fanavaozana sy ny fahombiazana izahay.
Ny fotoana ihany no hilaza raha toa ka hahatanteraka ny tanjona nolazainy amin'ny fananganana governemanta manampahaizana tsy miankina aminà vondrona i Sadr. Eo am-piandrasasna izany, dia mifampiraharaha amin'ireo antoko hafa izy mba hahatratrarana ny maro an'isa, seza 165, ilaina mba hananganana governemanta.